BEANPOLE Archives - Kavyalaya - काव्यालय
‘डोना टार्ट’को उपन्यास ‘द गोल्डफिन्च’मा आधारित फिल्म हो, ‘द गोल्डफिन्च’ । फिल्मको कथा ‘थियोडोराको’ जिवनको आसपासमा घुम्छ ।
थियोडोराको आमा आर्ट म्युजियममा भएको बम आक्रमणमा मर्छिन् । उसको पियक्कड बाउले पनि उसलाई छाडेर जान्छ । ऊ आफन्त कहाँ बस्न थाल्छ । आर्ट म्युजियममा बम आक्रमण हुँदा उसले त्यहाँबाट ‘द गोल्डफिन्च’ पेन्टिङ्ग लिएर आएको हुन्छ । उसले त्यो पेन्टिङ्गलाई लुकाएर राख्छ । आफू जहाँ-जहाँ जान्छ पेन्टिङ्ग पनि लिएर जान्छ ।
उसलाई पहिल्यैबाट एन्टिक बस्तुहरु प्रती शौख हुन्छ । उसको पियक्कड बाउ उसलाई एकदिन लिन फर्कन्छ । बाउसँगै अर्कै भुगोल पुग्छ । त्यहाँ उसले साथी बनाउछ जसले उसलाई नशाको आदत लगाइदिन्छ ।
थियोडोरा कहाँ-कहाँ पुग्छ ? पेन्टिङ्गलाई कहाँ-कहाँ पुर्याउछ ? पेन्टिङ्गले उसलाई कहाँ-कहाँ पुर्याउछ ? पेन्टिङ्गसँग को-को जोडिन्छन् ?
स्पेनिस कलाकारहरुमा ‘रिकार्डो ड्यरेन’ पछि ‘एन्टोनियो’ नाम आउँछ मेरो मुखमा । ‘The skin I lived in’ मा देखेको थिएँ, ‘एन्टोनियो ब्यान्ड्रेज’लाई । उनको अभिनयले हिप्नोटाइज गराइदिन्छ ।
स्टोरीटेलिङ्ग गज्जबको छ, यो स्पेनिस ड्रामा ‘पेन एन्ड ग्लोरि’को ।
फिल्मले आफैंसँगको लडाइँको कथा भन्छ । आफैंलाई पराजित गरेको, आफैंलाई जितेको कथा भन्छ ।
फिल्मले एउटा ट्रबल्ड फिल्ममेकरको कथा भन्छ । उसको बिगत र वर्तमानलाई समानान्तर रुपमा देखाउछ ।
फिल्मको कथा- उपन्यास ‘War doesn’t haveawoman’s face’ बाट प्रेरित छ । यो रसियन फिल्मले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको समयको कथा भन्छ ।
दुई अत्ति’नै मिल्ने साथीहरु छन्, इया र मासा । दुबैका समस्या हुन्छन् । शरीर बेला-बेलामा जम्ने अनौठो रोगबाट ग्रस्त छिन्, इया । धेरै पटकको एबोर्सनका कारण मासा आमा बन्न सक्दिनन् ।
जम्ने रोगको कारण इयाले एडोप्ट गरेको बच्चा मर्छ । मासा आफू आमा बन्नको लागि इयालाई उसको लागि बच्चा पाइदिन अनुरोध / जोड गर्छिन् ।
फिल्मले यी दुईको संघर्षको कथा मात्रै बताउँदैन, ईर्ष्या, प्रेम, घृणाको कथा पनि बोल्छ । फिल्म स्लो छ तर गहिरो छ ।
‘मार्टिन स्कोरसेस’ क्राइम थ्रीलर बनाउन खप्पिस छन् । ‘द आइरिसम्यान’ उनको अर्को खत्रा मास्टरपिस भन्दा कत्तिपनी फरक नपर्ला । अझ ‘रोबर्ट डि नेरो’ र ‘एल प्याचिनो’ ले फिल्मलाई अर्कै लेभलमा पुर्याईदिएका छन् ।
लगभग साढे तीन घन्टाको फिल्म ‘चार्ल्स ब्र्यानड्ट’को किताब ‘I heard you paint houses’ मा आधारित छ ।
‘फ्र्यान्क’ ट्रक ड्राइभर हुन्छन् । उनी ठाँउ-ठाँउ मासु पुर्याउने काम गर्ने हुन्छन् । अवैधानिक रुपमा बिस्तारै उनले मासु लोकल ग्याङ्ग्स्टारहरुलाई सप्लाई गर्न थाल्छन् ।
उनको वकिलले उनलाई अरु ग्याङ्ग्स्टारसँग चिनाइदिन्छन् । बिस्तारै उनी ग्याङ्ग्स्टारसँग काम गर्न थाल्छन् । यसरी उनी अपराधीक दुनियाँमा प्रवेश गर्छन् ।
अब के हुन्छ ? ऊ को-कोसँग जोडिन्छ ? कहाँ-कहाँ पुग्छ ?
हाइस्कुलको अन्तिम दिन । भोलि सबै विद्यार्थीहरु ग्र्याजुएसन हुँदै छन् । सबै विद्यार्थीहरु अन्तिम दिन आ-आफ्नै तरिकाले पार्टी गर्ने तयारी गर्दैछन् ।
एमि र मोलि एकदमै मिल्ने साथी हुन् । यी दुईको भने कुनै योजना छैन । अन्ततः दुबै जना पनि आफ्नो नियम तोड्दै ग्र्याजुएसन हुनु अघि हाइस्कुलको अन्तिम दिन अबिस्मरणिय बनाउन चहान्छन् । साथीहरुले आयोजना गरेको रात्रीपार्टिमा जान्छन् ।
‘बुक्समार्ट’ यी दुई साथीको कथा हो । हाइस्कुलको अन्तिम दिनको कथा हो जसलाई रसाइलो / रमाइलो तरिकाले देखाइएको छ । हाइस्कुलको अन्तिम दिन उनिहरु कहाँ-कहाँ भट्किन्छन् ? के अन्तिम दिन सबैसँग छुटिनु भन्दाअघि उनिहरुले आ-आफ्नो क्रसलाई प्रेम जाहेर गर्न सक्षम हुन्छन् ?
यो वर्ष धेरै कम फिल्मले मन-मस्तिष्कलाई छोयो । मेरो मन-मस्तिष्क दुबैलाई छुनेहरुमा एउटा ‘हनिल्यान्ड’ पनि हो ।
मेक्यान्डोनियाको सुदुर गाउँमा एउटा महिला बस्छिन् । उनी 84 वर्षीय बुढी बिमारी आमासँग बस्छिन् । उनले मौलिक / पुर्खौली तरिक अपनाएर मौरीपालन गरेकी छिन् । उनी त्यो काममा निपुर्ण छिन् । मौरीलाई आमा जस्तै माया गर्छिन् ।
नजिकैको शहरमा मह बेचेर गुजारा गर्ने हुन्छिन् ।
एकदिन एउटा परिवार बसाई सरेर त्यहाँ आउछन् । उनिहरुले पनि मौरी पाल्न थाल्छन्, आधुनिक तरिकाले । अब के हुन्छ ?
फिल्मले तपाईंलाई पुरै पगालिदिन्छ । उत्कृष्ट विदेशी भाषाको फिल्मको लागि यसले ओस्कार लग्यो भने कत्तिपनी अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
मंसिर १४, २०७६0comment